Maamulka degmada C/casiis oo deeq xoolo ah gaarsiiyay caruurta ku jirta xarunta Dr. Kadare “Sawirtro” – Radio Muqdisho
Maamulka degmada C/casiis oo deeq xoolo ah gaarsiiyay caruurta ku jirta xarunta Dr. Kadare “Sawirtro”
Guddoomiyaha Degmada C/casiis Cusmaan Muxuyidiin Cali ayaa maanta ku wareejiyay laba neef oo ari ah oo loogu talo galay caruurta danyarta iyo kuwa darbi jiifka ah ee ku jira xarunta lagu xanaaneynayo oo arwada madaxweynaha Dalka ay hirgalisay taasi oo wax badan ka tari doonta muraalka caruurtaasi.
Guddoomiyaha maamulka Degmada C/casiis Cusmaan Muxuyidiin Cali ayaa sheegay in xoolahani uu ugu talo galay in ay ku jimceystaan aruurtaan lagu xanaaneynayo xarun ku taala degmada C/casiis ee uu guddoomiyaha ka yahay, waxaana uu ku wareejiyay guddoomiye ku xigeenka xaruntaasi Xaliima Cabdulle Cali.
Guddoomiye ku xigeenka xaruntaasi lagu xanaaneynayo Xaliima Cabdulle Cali oo ka guddoontay guddoomiyaha xoolahaasi ayaa ka mahadcelisay.
Guddoomiye ku xigeenka ururka haweenka Qaranka Canab Xasan Cilmi,Guddoomiyaha Ururka haweenka Gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab, iyo maama Caasho Cumar Geesdiir oo xaruntaasi ku dhiira galinayay caruurtaasi Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida diyaarka ay ugu yihiin in ay dhiira galiyaan caruurtani Soomaaliyeed oo u baahan aryeelka.
Dhinaca kale dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood isku soo xilqaamay oo ku bahoobay urur lagu magacaabay Yoola ayaa iyana caruurtaasi Soomaaliyeed ugu deeqay dawooyin iyo baaritaano ay ugu kuur galayaan xaaladooda Caafimaad.
Dhameystirka waddada halbowlaha u ah Buuhoodle oo laga shiray
Carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho oo maanta la soo gebagebeeyay